ऋग्वेद शर्मा शनिबार, जेठ १०, २०७७, १३:४१
काठमाडौं- विश्व फुटबल जगतमा खेलको जित हारको जति चर्चा हुन्छ क्लबहरुले गर्ने खेलाडी किनबेचमा पनि उस्तै देखिन्छ। खेलाडी किनबेचको समयमा नै त अझ विश्व खेल बजार खेलभन्दा बाहिर नै पुगेको हो कि जस्तो लाग्दछ। विशेष गरी युरोपियन फुटबल बजारमा।
अहिले कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को माहामारीले खेल जगत पनि थिचिएको छ। यसले आर्थिक संकटमा क्लबहरु परिरहेका छन्। तर अहिलेकै परिस्थितिमा पनि नयाँ सिजनका लागि को कहाँ तानिने हुन् भन्ने चर्चा चलि नै रहेको छ। नयाँ फुटबल सिजनमा महँगा ट्रान्सफर कठीन देखिए पनि फुटबल जगतमा खेलाडी किनबेचलाई लिएर केही चर्चा, केही हल्ला र अनुमानहरु हुन थालेका छन्।
गएको सिजनमा नै क्लब छाड्न चाहेका केही खेलाडी र ठूला क्लबले संकटकै समयमा पनि खोजिरहेका नयाँ खेलाडीले ट्रान्सफर समय केही रोचक हुने देखिन्छ। क्लबको आर्थिक संकटका कारण अहिले खेलाडीको तलब कम गर्नेदेखि केही क्लबले कर्मचारी कटौती गर्ने काम भएका छन्।
यस्तोमा केही क्लब भने नयाँ सिजनको ट्रान्सफरलाई लिएर पनि तयारीमा लागेका छन्। हुन पनि युरोपियन फुटबल बजारलाई हेर्ने हो भने त संकटको यो समयमा पनि समाचारका अनलाइन पोर्टल हुन् वा पत्रिकाका स्पोर्टस् कोलम ‘ट्रान्सफर चर्चा’ सबैभन्दा बढी पढिने सामाग्री बनिरहेका छन्।
अहिले खेल ठप्प हुँदा टिकट बिक्री छैन। खेल भएकै स्थानमा पनि दर्शकलाई अनुमति छैन। व्यापारिक प्रायोजनहरु आउन सकेका छैनन्। २०१९-२०२० कै सिजन बीचका अड्किएको छ। च्याम्पियन्स लिग र युरोपा लिग जस्ता प्रतियोगिता पनि कमजोर स्थितिमा देखिन्छ। तर पनि बोरुसिया डर्टमुन्डका विंगर जाडन सान्चोमाथि एक सय मिलियन पाउण्ड र टोटनह्यामका ह्यारी केनमाथि दुई सय मिलियन पाउण्डको मूल्य तोक्न बजार सक्रिय भइरहेको छ।
तर अहिलेको अप्ठ्यारो परिस्थितिले सबैभन्दा ठूलो धक्का दिने ठाउँ खेलाडी ट्रान्सफर नै हो भन्नेमा दुविधा छैन। यसले सबैभन्दा बढी असर त लिगका तल्ला क्लबहरुलाई गर्नेछ। फुटबल अब्जरभेटरीको ए्उटा अध्ययन अनुसार अहिलेको परिस्थितिमा युरोपका ठूला पाँच लिगमा खेलाडी किनबेचमा २० देखि ३० प्रतिशतले मूल्यमा कमि आउनेछ।
तर क्लबहरुमा देखिएको संकटको अवस्थामा पनि महँगा खेलाडीको किनबेच चर्चामा भने कमि आएको छैन। फ्रेन्च क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेन (पिएसजी) ले प्रिमियर लिग क्लब म्यानचेस्टर युनाइटेडबाट पोउल पोग्बालाई ल्याउने चर्चा चलिरहेको छ। जसका लागि पिएसजीले आफ्ना खेलाडी एन्जेल डि मारियालाई प्रयोग गर्ने संकेतहरु आइरहेका छन्।
पिएसजीकै नेमार भने गएको सिजनदेखि नै बाहिरिन खोजिरहे पनि महँगो रकमका कारण अप्ठ्यारोमा परिरहेका छन्। नेमारलाई ल्याउन स्पेनिस क्लब रियल मड्रिडका अध्यक्ष फ्लोरेन्टिनो पेरेज नै लागिपरेको पनि बताइन्छ। तर नेमार गएको सिजनदेखि नै बार्सिलोनामा आउने प्रयासमा लागिरहेका थिए।
आर्सनलका इमिरिक, बोरुसिया डर्टमुन्डका सान्चो र हल्यान्ड, पिएसजीका थोमस, लिसेस्टर सिटीका जेम्स म्याडिसन, लिलेका स्ट्राइकर भिक्टोरी ओसिमहेन, एथ्लेटिको मड्रिडका थोमस पार्टी, नापोलीका कालिडो कोलिबाले, युभेन्टसका मिरालेम र बार्सिलोनाका उमटिटी जस्ता खेलाडी नयाँ सिजनमा क्लब परिवर्तन हुने चर्चा चलिरहेको छ। यसका साथै हरेक क्लबले बेच्नुपर्ने र किन्नुपर्ने भनिएका खेलाडीको सूची पनि आइरहेकै छन्।
यस्तोमा म्यानचेस्टर युनाइटेडका कार्यकारी उपाध्यक्ष एड उडवार्ड भने खेलाडी किनबेचमा ठूला रकमको चर्चा गरेर अहिलेको परिस्थितिले फुटबलमा पारेको गहिरो असरलाई वेवास्था गर्न नहुने बताइरहेका छन्।
हुन पनि धेरै रकम तिरेर खेलाडी किन्नुलाई सफलतासँग दाँजिहाल्न पनि स्वभाविक देखिँदैन। कतिपय उदाहरणहरु नै छन् जसमाथि क्लबले ठूलो रकम खर्च गरेर पनि उपादेयता निस्किएका छैनन्। त्यसो भएमा ठूलो रकमा किनिएका खेलाडी क्लबकै लागि आर्थिक रुपले घातक सावित भइदिन्छन्।
तर पनि हरेक सिजन केही ठूला किनबेच हुन्छन् नै जसले विश्व खेल बजार हलाइदिन्छन्। एक खेलाडी बेचेर आएको रकमको लगानी सही नहुँदा त क्लबमै समेत ‘भूकम्प’को जस्तो धक्का सिर्जना भइदिन्छ।
नेमार - बार्सिलोनाबाट पिएसजी
नेमार २२२ मिलियन युरोमा सनु २०१७ मा बार्सिलोनाबाट पिएसजी गएपछि बार्सिलोनाले उनको विकल्पको खेलाडीको खोजी सुरु गर्यो। त्यसपछि नै बार्सिलोनाले १४५ मिलियन युरोमा फिलिप कोउटिन्हो र १२५ मिलियन युरोमा उसमान डेम्बेले किन्यो।
ठूला रकमका ती दुई बाहेक पनि बार्सिलोनाले ४० मिलियन युरोमा पोउलिन्हो, ३५ मिलियनमा नेल्सन सेमेडो र १२ मिलियन युरोमा जेरार्ड डेउलाफेउ किन्यो। तर ती खेलाडीका राम्रो फाइदा बार्सिलोनाले लिन सकेन। कोउटिन्हो बायर्न म्युनिखमा लोनमा छन् भने डेम्बेले घाइते हुने समस्याबाट निस्किएका छैनन्। नेमार अहिले फेरि बार्सिलोना नै फर्कने प्रयासमा छन्।
क्रिष्टियानो रोनाल्डो - रियल मड्रिडबाट युभेन्टस
क्रिष्टियानो रोनाल्डो कुनै क्लबमा हुनु क्लबका लागि कति फाइदाको विषय हो भन्ने बताइरहनु नपर्ला। रियल मड्रिडले पछिल्लो समय पाएका उपलब्धीको केन्द्रमा कोही छन् भने ती रोनाल्डो नै हुन्। रोनाल्डो २००९ मा म्यानचेस्टर युनाइटेडबाट रियल मड्रिड आएपछि र उनी २०१८ मा रियल मड्रिड छाडेर युभेन्टस गएपछिको अवस्था सबैलाई थाहै छ।
रियल मड्रिडमा रहँदाका उनका कीर्तिमान हेरे मात्र पनि पुग्छ। तर २०१८ मा रोनाल्डो १०० मिलियन युरोमा युभेन्टस गएपछि मड्रिडले उनको अभाव महसुस गरिरहेको छ। उनको विकल्पका खेलाडी अझै भेट्न सकिरहेको छैन।
लुइस स्वारेज - लिभरपुलबाट बार्सिलोना
प्रशिक्षक योर्गेन क्लोप आउनुअघि लिभरपुल अहिलेको अवस्थाबाट निकै पछाडि थियो। जसले उनीहरुले स्वारेज बेचेर आएको ८१ मिलियन युरोमा आदम लालाना, डेजान लोभरेन, लाजार मार्कोभिच र मारियो बालाटोली जस्ता खेलाडी ल्याउन सकेका थिए।
त्यही वर्षको अन्त्यमा अल्बर्टो मोरेनो, डिभोक ओरिगी र इमेर क्यान पनि ल्याइए। तर लिभरपुलले आफ्नो उचाइ पाउन निकै समय पर्खनुपर्यो। जहाँ बार्सिलोना गएका स्वारेजले राम्रा उपलब्धीहरु पाइसकेका थिए।
लुइस फिगो - बार्सिलोनाबाट रियल मड्रिड
सन् २००० मा नै लुइस फिगो बार्सिलोनाबाट ६० मिलियन युरोमा रियल मड्रिड गएका थिए। जुन रकमले बार्सिलोनाले चार खेलाडी किन्ने योजना बनाएको थियो जसमा मार्क ओभरमार्स र इम्यानुयल पेटिटी जस्ता खेलाडी पनि थिए।
जसमा चारै खेलाडीले क्लबमा राम्रो छाप छाड्न सकेनन्। पेटीटी ल्याउनु र बार्सिलोनाका लागि ठूलो ‘असफलता’ नै बनिदियो। फिगोले छाडेपछिको पाँच वर्ष त बासिलोनाले ला लिगाको उपाधि जित्न समेत सकेन।
ग्यारथ बेल - टोटनह्यामबाट रियल मड्रिड
ग्यारथ बेललाई ल्याएर रियल मड्रिडले जति फाइदा पायो त्यो भन्दा कयौँ गुणा बढी घाटा टोटनह्यामलाई भयो। लामो समय क्लबमा उनको अभाव खड्किएको थियो।
टोटनह्यामले ६० मिलियन युरो इरिक लामेला र रोबर्टो सोल्डाडोमा खर्च गरेको थियो तर दुवैले सोचेअनुसार खेल देखाउन सकेनन्। अरु केही खेलाडी मिडफिल्डमा पनि थपिएका थिए तर बेलको अभाव कतैबाट पूरा हुन सकेन।
केलियन एमबाप्पे - मोनाकोबाट पिएसजी
पछिल्लो पुस्ताका फुटबल स्टार एमबाप्पेको खेलशैली हरेकलाई थाहा छ। पिएजसीमा उनले आफ्नो जादु देखाइरहेका पनि छन्। तर एकै समय एमबाप्पे, थोमस लेमार र फाबिन्नो गुमाएको क्लबलाई कस्तो भएको थियो होला।
तर मोनाको तीनलाई बेचेर ल्याएको ३३० मिलियन युरोमा त्यो कमि पूरा गर्ने आश गरेको थियो। मोनाकोले त्यसपछि नै अलेक्जेण्डर गोलोभिन, विसाम भेन एडर र गेल्सन मार्टिन्सलाई ल्याएको थियो तर उनीहरुले एमबाप्पेको कमि पूरा गर्न सकेनन्।
क्रिष्टियन भिएरी - एथ्लेटिको मड्रिडबाट लाजियो
क्रिष्टियन भिएरीलाई अहिलेको पुस्ताले नचिने पनि उनी अघिल्लो पुस्ताका ‘फुटबलमा तहल्का’ थिए। इटालीका यी खेलाडी १९९८ मा एथ्लेटिको मड्रिडबाट लाजियो जाँदा एथ्लेटिकोले निकै गुमाएको महसुस गरेको थियो। हुन त त्यही समय भिएरी बेचेर एथ्लेटिकोले २८ मिलियन युरो कमाएको थियो तर उनलाई बेचेपछिकै सिजन एथ्लेटिको लिगमा १३औँ स्थानमा पुग्नु संयोग मात्र हुन सक्दैन।
सरकार किन प्रश्न सुन्दैन?
अहिलेसम्मकै खराब हो बार्सिलोना? च्याम्पियन्स लिगको कमजोर उपस्थितिले पछिल्ला वर्ष आलोचित हुने गरेको स्पेनिस क्लब बार्सिलोना अहिले सबैतिर कमजोर बनिरहेको छ। खेलाडीहरुक... मंगलबार, असार १६, २०७७